chinbridge – Page3– chinbridge Institute
Za Peng Lian Penja Lam Lawi thai naira Penja lam lawi thai naira napie nai ly university ha harie y cha patiu pie nai sara/saranuchie, research pany ai nai athosa nai keungchie hawi ka-sang penja amtiu nai kjeaungtabie neampacho neampachy bawibawi ih kavui ngai parai nai lawi thai naira ne. Huni khyh chang y penja … Continue reading Chin Prie Ka-sang Penja Lam Lawi thai naira →
Hakha (Tekahto), College Pyinya mong lah cong Im, bi lo khap shoi nak gui (Cho Version)
Posted on January 23, 2020 February 19, 2020 by chinbridge
Tha Cer Cin Hngu hmat nak vai, ng’thei tham nak-ung hlü ca, cong Im, ang hloi ah, bi lo nak vai gui shäm cuh, (Tekahto)ahang kai nak vai phäh,atung pi-ah, hlü ca kya ki. K’Cho khaw yung om ca (Tekahto), College gui yung, hlü ca Cong Im, ang hloi-ah bi lo … Continue reading Hakha (Tekahto), College Pyinya mong lah cong Im, bi lo khap shoi nak gui (Cho Version) →
Posted on January 20, 2020 February 19, 2020 by chinbridge
Cer Khengmual ကျောင်းသူ/သားများ ပညာသင်ယူရာတွင် မိမိကြိုက်နှစ်သက်သည့်တက္ကသိုလ်များ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်ရခြင်းဟာ အရေးကြီးလှပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးစနစ် (education system)ကို လေ့လာကြည့်သည့်အခါ မိမိကြိုက်နှစ်သက်သည့်ဘာသာရပ်များ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသည်ဟု ပြောနိုင်သော်လည်းပဲ လက်တွေ့အခြေအနေမှာ မြောက်များစွာသောအခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ ရှိနေတတ်သည့်အတွက် မိမိတို့လိုချင်၊ မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလာတတ်သည့်အခြေအနေ ရှိတတ်ပါသည်။ အချို့သောကျောင်းသူ/သားများဟာ မိမိတို့တက်ရမည့်တက္ကသိုလ်၊ သင်ကြားရမည့် ဘာသာရပ်များကို လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသူများ (ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန) က သတ်မှတ်ပေးပြီးသား ပုံစံဖြစ်နေသည့် အတွက် သူတို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရမည့်လမ်းကို ပိတ်ပင်အဟန့်အတားဖြစ်နေသည့်အပြင် သူတို့မကြိုက် မနှစ်သက်သည့် ဘာသာရပ်များသင်ယူနေကြခြင်းကြောင့် အရည်အချင်းမရရှိတော့ဘဲ အလဟဿအချိန်ကုန်သွားခြင်းမျိုး တွေ့ရပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရမည့် နည်းလမ်းမြောက်များစွာ ရှိသည့်အထဲမှာ တက္ကသိုလ်ပညာသင်ယူခြင်းလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မတို့တက္ကသိုလ်ပညာသင်ယူတဲ့အခါ ကျောင်းစာသင်ယူနေရသည့် အပြင် အခြားဗဟုသုတမြောက်များစွာကို လေ့လာသင်ယူရသည့် နေရာဖြစ်သည့်အတွက် တက္ကသိုလ် ကျောင်းတော်ကြီးက … Continue reading တက္ကသိုလ်ပညာရေးနှင့်ကျောင်းသူ/သားများ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့် →
ဟားခါးတက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ် ပညာရေးနှင့်အဆောက်အအုံ၊ ပစ္စည်းပစ္စယ
Tha Cer Cin အသိပညာ၊ အတတ်ပညာသင်ကြားရာတွင် လိုအပ်သည့် အဆောက်အအုံ၊ အထောက်အပံ့ ပစ္စည်း ပစ္စယများသည် တက္ကသိုလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ရန်နှင့် အရည်အချင်းရှိသည့် ပညာရပ်တစ်ခုရရှိရန်အတွက် အရေးကြီးလှပါသည်။ ချင်းပြည်နယ်ရှိ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များအနေဖြင့် လိုအပ်သည့် အဆောက်အအုံ၊ အထောက်အပံ့ပစ္စည်းပစ္စယများ ဘယ်လောက်ထိ ရှိနေသလဲ။ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာ ရပ်တည်နေကြ သလဲ၊ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းဟာ အရေးပါသည့်မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုသုတေသန၏ မေးခွန်း မှာ “ဟားခါး တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များ၌ လိုအပ်သည့် အဆောက်အအုံ၊ အထောက်အပံ့ ပစ္စည်းပစ္စယများ ဘယ်လောက်ထိပြည့်စုံမှုရှိနေပြီလဲ၊ ထိုသို့မပြည့်စုံခြင်းကြောင့် ပညာသင်ကြားရာတွင် အကျိုးသက် ရောက်မှု ဘယ်လောက်ထိရှိနေသလဲ၊” ဆိုသည့်အရာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤသုတေသန၌ အဓိကအားဖြင့် ပညာသင်ကြားရာတွင် လိုအပ်သည့် အဆောက်အအုံ၊ ပစ္စည်း ပစ္စယ၊ အားကစား၊ … Continue reading ဟားခါးတက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ် ပညာရေးနှင့်အဆောက်အအုံ၊ ပစ္စည်းပစ္စယ →
ကျူရှင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးခြင်းနှင့် အဆင့်မြင့်ပညာရေး
Salai Ngun San Aung ကျူရှင်ဆိုသည့်အခေါ်အဝေါ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာက ပညာသင်ကြားသည့်ကျောင်းချိန်ပြင်ပ၌ သီးသန့်သင်ကြား/ယူရသည့်အချိန်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Frontier Myanmar ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကျူရှင်သင်ကြားခြင်းဟာ ဝင်ငွေကောင်းသောလုပ်ငန်းတစ်ရပ်အနေဖြင့် ယနေ့အထိ တည်ရှိလျက်ရှိ ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ကျူရှင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် နိုင်ငံအများစုက တရားမဝင် သည့် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဆင့်မြင့်ပညာ သင်ယူရသည့် တက္ကသိုလ်၌ပင် ကျူရှင်သင်ကြားမှုများရှိနေရုံသာမက တခါတရံ အကျိုးတစ်ခုခုကို မျှော်ကိုးပြီး ဆရာ/မများထံ လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးနေမှုများရှိ​နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် တက္ကသိုလ်၌ အဘယ်ကြောင့် ကျူရှင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးခြင်း ရှိရသနည်း။ ၎င်းက ကျောင်းသူ/သားများအတွက် အကျိုးကျေးဇူး ဘယ်လောက်ရှိစေသလဲ၊ သို့မဟုတ် အကျိုးယုတ်မှုများ ဘယ်လောက်ထိရှိနေသလဲ၊ အမှန်တကယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမျိုးရောရှိသလား၊ ဆိုသည့် အချက်များကို လေ့လာရန် … Continue reading ကျူရှင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးခြင်းနှင့် အဆင့်မြင့်ပညာရေး →
ချင်းပြည်နယ် အဆင့်မြင့်ပညာရေး လွတ်လပ်ခွင့်
ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့် ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုသည်မှာ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခု၌ သင်ကြားရေးဆရာ/မများ၊ သုတေသနအဖွဲ့ တစ်ခုခု၏ သုတေသီများနှင့် အဆင့်မြင့်ပညာသင်ယူလေ့လာနေသော ကျောင်းသူ/သားများအတွက် မဖြစ်မနေရှိရမည့် လွတ်လပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာ ဆရာ/မ၊ သုတေသီများနှင့်ကျောင်းသူ/သားများ လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ရုံသာမက ပညာရပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင် သည့် မည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဟာ သင်ကြားရေး လွတ်လပ်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာသုတေသနပြုလုပ်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ဖြစ် သည့်အပြင် အလုပ်လုပ်ပြီး သင့်လျော်သည့် အရည်အချင်းရှိပြီး ပညာရပ်ဆိုင်ရာ၌ အုတ်မြစ်ချသူ မည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်ထားသော လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ပါသည်။ ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီး၌နေထိုင်သည့်မည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် လူ့အခွင့် အရေးတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို ပညာသင်ယူလေ့လာသူ၊ အောင်မြင်မှုရရှိသူတိုင်း ပိုင်ဆိုင်သည့် လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ပါသည်။ ပညာရေး လွတ်လပ်ခွင့်၌ ပါဝင်အကျုံးဝင်သည့်အရာများမှာ လွတ်လပ်စွာသင်ကြားပြသခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ သုတေသနလုပ်ငန်း … Continue reading ချင်းပြည်နယ် အဆင့်မြင့်ပညာရေး လွတ်လပ်ခွင့် →
စိုက်ပျိုးရေးသိပံ(လုံပီး)တွင် သင်တန်းသူ၊ သင်တန်းသားများ တွေ့ကြုံရသည့် အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ
Mary Kipmen ဤသုတေသနက ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းမြို့နယ်၌ရှိသော စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ(လုံပီး)ကျောင်းသို့ တက် ရောက်နေကြသော ကျောင်းသူ/သားများ တွေ့ကြုံနေကြသည့် အခက်အခဲ၊ ပြဿနာနှင့်စိန်ခေါ်မှုများကို လေ့လာဆန်းစစ်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ သုတေသနအတွက် qualitative approach ကို အသုံးပြုပြီး ဆရာ/မများအပါအဝင် လူဦးရေ အယောက် ၂၀ ထံ လူတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၊ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ် မေးမြန်းခြင်းတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ ဤသုတေသန ဆန်းစစ်လေ့လာချက်အရ အောက်ပါ အချက်များကို တွေ့ရှိထားပါသည် - ပထမအချက်အနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ(လုံပီး)ကျောင်းသို့တက်ရောက်နေသာ ကျောင်းသူ/သားများက နေထိုင်ရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး အခက်အခဲရှိကြောင်း တွေ့ရှိထားပါသည်။ ကျောင်းသူ/သားများနေထိုင် ရန် အဆောင် (hostel) များလုံလောက်မှုမရှိသည့်အပြင် အိပ်ဖို့ရန် ခုတင်လည်းပဲ လုံလောက်မှုမရှိသည့် အတွက် တစ်ယောက်အိပ်ခုတင် နှစ်ခုကိုဆက်ပြီး (၃) ယောက်အတူတူ အိပ်ကြကြောင်း တွေ့ရှိထား … Continue reading စိုက်ပျိုးရေးသိပံ(လုံပီး)တွင် သင်တန်းသူ၊ သင်တန်းသားများ တွေ့ကြုံရသည့် အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ →
Observation on March 2019 Yangon Municipal Election Campaign (Lai)
Posted on March 24, 2019 March 24, 2019 by chinbridge
Salai Van Cung Lian Yangon Municipal thimnak ah constituency no.3caah aa cuh dingmi candidates dihlak 13 an si. Hi 13 chungah Yangon khuapi Mayor caah minung4an icuh i Yangon Municipal Committee chungtel thutden caah minung9an icuh. General Observation Yangon Municipal Thimnak zohfelnak chung in biapi deuh tiah ruahmi hmuhning … Continue reading Observation on March 2019 Yangon Municipal Election Campaign (Lai) →
Taking Corruption Seriously in the NGOs:Minimixing Waste and Maximizing Impact
Posted on March 23, 2019 March 23, 2019 by chinbridge
Salai Van Cung Lian It won’t beasurprising thing if someone said the NGOs and CSOs are not immune to cases of corruption, according toahandful of concrete evidences generated by the Chinbridge Institute. It means that public trust in non-governmental development actors such as NGOs, CSOs and Media is low, if not … Continue reading Taking Corruption Seriously in the NGOs:Minimixing Waste and Maximizing Impact →
Anti-corruption Commission Sin Report A Lutmi A Tam
Posted on March 21, 2019 March 21, 2019 by chinbridge
A luancia kum thum chungah Anti-corruption Comission of Myanmar sin ah ziknawh eihmuarnak kong reportalutmi buaktlak in cunatam nain ramthen (region) pawl sin deuh inasi. Ramrulh (State) in reportalutmiatlawm, timi Anti-corruption C omission website ah an langhtermi data zohnak in theih khawhasi. Kum … Continue reading Anti-corruption Commission Sin Report A Lutmi A Tam →